Musharaxiinta Hillary Clinton iyo Donald Trump oo Mar labaad Fooda is Daray (VIDEO) - Hablaha Media Network
Musharaxiinta Hillary Clinton iyo Donald Trump oo Mar labaad Fooda is Daray (VIDEO)
HMN:- Waxaa xalay mar labaad dalka Maraykanka isku food saaray musharaxiinta u tartamaya xilka Madaxtanimada dalkaasi ee Hillary Clinton iyo Donald Trump.
Labada Musharax oo ahaa kuwo aad u degan markii ay doodayeen ayaa waxa ay mararka qaar isku eedaynayeen in midba midka kale uu yahay qof aan uqalmin in uu qabto xilka madaxweynenimo.
Intii lagu guda jiray dooddii labaad ee madaxweyne oo ay la yeelatay Donald Trump, ayaa musharaxada Hillary Clinton waxa ay sheegtay in marnaba ciidamo dhulka ka dagaalama aysan u diri doonin dalka Syria, taasi oo ay sheegtay inay tahay xeelad aan wanaagsaneyn.
Waxa ay xaaladda magaalada Aleppo ku sheegtay mid musiibo ah, islamarkaana Russia ay go’aan ku gaartay inay burburiso, si ay xukunka ugu sii hayso Bashar Al-Assad.
Trump ayaa waxa uu sheegay in ninka uu u doortay inuu madaxweyne ku xigeen u noqdo ee Mike Pence ku raacsaneyn in la duqeeyo bartilmaameedyada dowladda Syria.
Trump ayaa dhinaca kale cudur daar ka bixiyey hadallo uu ku aflgaadeeyey haweenka oo laga maqlay cajalad jimcihii la baahiyey oo la duubay sanaddii 2005, waxaana uu sheegay inuu dareemayo ceeb la soo gudboonaatay.